Kasety fiarovana PVC manohitra ny slip
Ny anti-slip tape dia vita amin'ny sombina silikika karbonika mafy sy maharitra. Ny poti-javatra toy izany dia apetraka amin'ny sarimihetsika plastika mahery vaika, mampifandray, tsy mahazaka toetr'andro, ary io no iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra fantatra hatramin'izao.
Kasety fampitandremana PE tsy mifatotra
Ampiasaina amin'ny fitokana-monina amin'ny toerana fanorenana, toerana mampidi-doza, lozam-pifamoivoizana ary loza tampoka. Ary ny fefy ho an'ny fikojakojana herinaratra herinaratra, fitantanana ny arabe, teknika fiarovana ny tontolo iainana.
Kasety Barrier PVC
Ny tombo-kase fampitandremana Barrier dia manana tombony amin'ny tantera-drano, tsy hamandoana, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny statika, sns. Mety amin'ny fiarovana ny harafesin'ny fantsona ambanin'ny tany toy ny fantson-drivotra, fantson-drano, fantson-tsolika sns. Ny takelaka misy loko roa dia azo ampiasaina amin'ny fambara fampitandremana amin'ny tany, tsanganana, tranobe, fifamoivoizana ary faritra hafa.
Kasety fampitandremana PE
Mampiasa fitaovana PE tsara, loko mamirapiratra. Ampiasaina be izy io ho an'ny fampandrenesana eo an-toerana sy ny fitokanana ny vonjy taitra na ny faritra fananganana sy ny faritra mampidi-doza.
Kasety fampitandremana sakana PVC
Ny kasety Fampitandremana Barrier dia antsoina koa hoe kasety famantarana, fantson-tany, kasety gorodona, fantsona famantarana marobe, sns. Kasety vita amin'ny horonan-tsary PVC izy io ary mifono adhesive mora tohina amin'ny tsindry.
Sarimihetsika maninjitra LLDPE
Ny sarimihetsika plastika mamelatra plastika dia ampiasaina amin'ny paompy mihodina, fonosana baoritra, fiarovana ny vokatra, fonosana vokatra miendrika endrika manokana, fisorohana ny fahasimban'ny entana ary mety amin'ny fitaterana
Ny sarimihetsika LLDPE mihinjitra dia manana tombony amin'ny fahamendrehana mafy, ny elastika avo lenta, ny fanoherana ny ranomaso, ny fanoherana ny vovoka, ny rano.
Tape vita amin'ny varahina voapaika
Ny varahina varahina dia manondro tady varahina manify, matetika tohanan'ny adhesive. Ny varahina varahina dia hita amin'ny ankamaroan'ny fivarotana fitaovana sy zaridaina ary indraindray fivarotana elektronika. Ny varahina dia ampiasaina mba hitazomana ireo slug sy snailsout amin'ny faritra sasany ao amin'ny zaridaina, zavamaniry misy vilany, ary vatan-kazo misy voankazo, sy hazo hafa sy hazo kely.
Kasety foil aluminium
Product description Material Aluminium foil Adhesive type Acrylic solvent Colour Silver Feature Silver silver, UV resistant, fireproof, sns Halavany dia afaka manamboatra ny Width afaka manamboatra serivisy Manaiky OEM Packing Manaiky hanaingo ny serivisy santionany Manome santionany maimaim-poana, ny entana dia tokony aloa amin'ny mpividy sheet Sheet Data Aluminium foil Aluminium foil kasety FSK Fanohanana alim-bovoka Aluminium foil Adhesive Acrylic solvent acrylic Ba ...
Tape-drakitra vita amin'ny varahina roa
Tape vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina tokana